Muqdisho City Club oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda Elman kulan ka tirsanaaa koobka General Daa’uud – Gool FM
Real Madrid oo guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Real Valladolid oo ay booqatay… +SAWIRRO
Napoli oo guul ay u qalantay kaga gaartay Juventus Stadio San Paolo… +SAWIRRO
Muqdisho City Club oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda Elman kulan ka tirsanaaa koobka General Daa’uud
Dajiye November 1, 2019
(Muqdisho) 01 Nof 2019. Kooxda Muqdisho City Club ayaa guul 2-1 ah ka gaartay naadiga Elman, kulan ka tirsanaaa koobka xiisaha badan ee General Daa’uud oo ay galabta ku wada ciyaareen garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca Degmada Cabdicasiis.
Qeybta hore ee ciyaarta aayaa lagu kala maray barbaro 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood.
Daqiiqadii 8-aad Kooxda Muqdisho City Club ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana dheesha 1-0 ka dhigay xiddigooda lagu magacaabo Marcello.
Laakiin daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta Elman oo heshay goolka barbaraha, waxaana 1-1 ka dhigay dheesha Jamaal.
Qeybta labaad ee ciyaarta marka dib ay dib isugu soo laabteen labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxayna sameeyeen fursado halis ah ee goolal loo filan karay.
Laakiin daqiiqadii 70-aad Kooxda Muqdisho City Club ayaa waxay la wareegtay hogaanka ciyaarta waxaana 2-1 ka dhigay markale Marcello.
Ugu dambeynii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Muqdisho City Club, waxayna sidaas ku heleen 6 dhibcood, labo kulan ay ka ciyaareen koobka xiisaha badan ee General Daa’uud.
Klopp oo hogaaminaya Tababarayaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha October ee horyaalka Premier League
Waa kee kulanka uu Lionel Messi ugu jecel yahay xirfaddiisa Barcelona?